IBozoma Saint John inokushiya iApple kungekudala | Ndisuka mac
I-Bozoma Saint John ikunye no-Eddy Cue kunye noJimmy Lovine, abaphathi abaphezulu be-Apple Music ngaphakathi kwenkampani, kodwa ngokwamarhe amva nje avakaliswa lupapasho lwe-Axios, ecaphula imithombo yayo yonke into, U-Saint John uzimisele ukushiya inkampani kungekudala. Eli ziko lizamile ukunxibelelana negosa lakwa-Apple elinokuqinisekisa okanye lizikhanyele iindaba, kodwa inkampani iyalile ukwenza nasiphi na ingxelo. UBozoma Saint John okwangoku uyintloko yentengiso yehlabathi yeApple Music, inkampani athe weza kuyo emva kokuthenga iBeats Music kwi2014, inkampani awayeye kuyo emva kokuba ngumlawuli ePepsi.
Ekuqaleni wayesebenza kuthethathethwano ngezivumelwano kunye nezinto ezizodwa zeApple Music, kodwa njengoko iinyanga zadlula emva kokuthengwa kweBeats, waqala ukuthatha inxaxheba enkulu ekunikezelweni kwesicelo seApple Music kwisakhelo seNkomfa yeHlabathi yabaPhuhlisi ezimbini. kwiminyaka eyadlulayo. Ukususela ngoko uBoz, njengoko abahlobo bakhe abasondeleyo bahlala bembiza, Uye waba ngunozakuzaku weApple Music. Ngo-Okthobha ophelileyo, umzekelo, isigqeba sabonakala ecaleni kukasekela mongameli omkhulu we-intanethi, isoftware kunye neenkonzo uEddy cue, uJimmy Lovine noJames Corden, ophambili kwiCarpool Karaoke.
Ngo-Novemba ophelileyo, iphephancwadi i-Fortune lamema uBozoma kwiqonga elilandelayo leNkqutyana yabasetyhini apho wathetha ngokufudukela e-United States esuka eGhana xa wayekwishumi elivisayo. Ikwavele kwibhodi yemagazini yeBillboard's Power 100 itshathi, ngoFebruwari kulo nyaka, nangokuqhubeka Uluhlu lweshishini labamnyama uluhlu lwabona bafazi banamandla kwishishini ngo-Matshi.
Ukuba la marhe aqinisekisiwe ekugqibeleni, I-Apple izakuphulukana nomnye wabaphathi bayo ababhinqileyo inkampani isenayo Oku kubandakanya uLisa Jackson njengesekela mongameli womgaqo-nkqubo wezendalo, u-Angela Ahrendts ngokungqalileyo kwi-Apple Stores ebonakalayo kunye ne-intanethi kunye no-Denise Young Smith usekela-mongameli wangoku wobandakanyo nokwahluka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IBozoma Saint John inokushiya iApple kungekudala
Kuyinyani, kubonakala ngathi ibuyela kwi-Boney M !!!!.